‘उमेर पुगेको छोरी मान्छेलाई प्रेम प्रस्ताव आइहाल्छ नि’
2078-Mangshir-05 || मध्यान्ह
संघर्षले नै मानिसले सफलताको बाटोमा अघि बढाउँछ भन्ने कुराको उदाहरण हुन् मोडल उषा सुवेदी । स्कुले जीवनदेखि नै आफुभित्रको प्रतिभालाई आमदर्शक माझ प्रस्तुत गर्दै आइरहेकी अहिलेको चर्चित मोडल उषा सुवेदी आफ्नो अभिनय कलामार्फत आज आमदर्शकको मन मुटुमा बस्न सफल भएकी छन् । उनलाई नेपाली कला क्षेत्रमा सम्भावना भएको मोडलको रुपमा लिइन्छ । देश तथा विदेशमा हुने विभिन्न स्टेज कार्यक्रमहरुमा उपस्थिति जनाउँदै आइरहेकी सुवेदी कोरोना कहरले कला क्षेत्र मात्र नभएर सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारेकोमा चिन्तित छिन् । कलाकारितामा गरेको योगदानको कदर गर्दै विभिन्न दर्जन बढी संघसंस्थाले उनलाई सम्मान गरेका छन् । हालै राजधानीमा आयोजित ‘साहरा एप तेस्रो सगरमाथा म्युजिक अवार्ड २०७८’ बाट पनि उनी सम्मातिन भएकी छन् । ‘दुई दिन हँसायो’ बोलको गीतबाट उनी सम्मानित भएकी हुन् भने ‘साहरा एप तेस्रो सगरमाथा म्युजिक अवार्ड’ लगातार तीन वर्ष आफ्नो नाममा पारेर ह्याट्रिक नै गर्न सफल भएकी छन् । लोक दोहरी प्रतिष्ठान बागमती प्रदेशकी सचिवसमेत रहेकी मोडल उषा मोडलिङको क्षेत्रमा सुधार ल्याउनु पर्नेमा जोड दिन्छिन् । मोडलिङको दुनियाँमा पृथक पहिचान बनाउन सफल उषा सुवेदी चर्चित भन्दा पनि कुशल कलाकार बन्ने चाहना रहेको बताउँछिन् । निषेधाज्ञा खुकुलो भएयता म्युजिक भिडियोमा ब्यस्त रहँदै आएकी उषा सुवेदीले मध्यान्ह दैनिकका लागि सानु श्रेष्ठसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानीः
निषेधाज्ञा खुकुलो भयो, चाडपर्व पनि सकियो ब्यस्तता कतिको छ ?
बिस्तारै निषेधाज्ञा खुल्यो, कामहरु भैरहेको छ पहिलाको जस्तो सहज तरिकाले काम त भएको छैन, जे होस् कामहरु दैनिक जसो नै भैरहेको छ ।
कला क्षेत्रमा प्रवेश भैसकेपछि आफुमा के भिन्नता पाउनु भयो ?
हिजो म कला क्षेत्रमा नहुँदा कसैले चिन्दैन थिए । आज सबैले उषा सुवेदी भनेर चिन्छन् यसमै भिन्नता छ ।
मोडलिङमा भविष्य कतिको देख्नु हुन्छ ?
सबैको भविष्य छ त म भन्दिनँ, आफ्नो मेहनतलाई विश्वास गरेर काम गर्दा भने अवश्य पनि भविष्य राम्रो छ ।
मोडलिङ क्षेत्रमा विकृती बढ्यो भन्छन्, सुधारका लागि के गर्नुपर्ला ?
सम्बन्धित संघसंस्थाको ध्यान जानु प¥यो, विकृति फैलाउनेलाई कानूनी हिसाबले कारबाही गर्नु प¥यो । यो क्षेत्रमा विकृती नहोस् भनेर हामीले पनि खबदारी गरिरहेका छौं ।
पछिल्लो समय दर्शक श्रोताहरुले कस्तो खालको गीतसंगीत रुचाएको पाउनु भएको छ ?
मान्छेको गीत संगीतप्रति आ–आफ्नै खाले रुची हुन्छ, मेरो विचारमा मौलिक, टिपिकल गीतहरु नै रुचाएको पाएको छु ।
आफुले मोडलिङ गरेको गीतमध्ये मनपरेको चाहिँ कुन हो ?
यति धेरै गीतमा मोडलिङ गरेको छु तर पनि केही समय पहिले सार्वजनिक भएको र चर्चामा पनि रहन सफल ‘दुई दिन हँसायो’ बोलको गीत सारै मन पर्छ मलाई । यही गीतले ‘साहरा एप तेस्रो सगरमाथा म्युजिक अवार्ड २०७८’ मा लोक दोहरी अभियान तर्फबाट सम्माति पनि भएँ । यो अवार्ड मैले लगातार तीन वर्ष आफ्नो नाममा पारेर ह्याट्रिक नै गर्न सफल भएकी छु ।
मोडलिङ बाहेक अरु के गर्नु हुन्छ ?
रुचीको विद्या हो मोडलिङ । रमाइलो लाग्छ यो क्षेत्र । अहिले म पढ्दै बिजनेश पनि गर्छु ।
स्टेज कार्यक्रमहरु शुन्य भएको अवस्थामा तपाईं कलाकारहरुको मुख्य आयश्रोतको विकल्प के हुन सक्छ ?
कोरोना भित्रिनु भन्दा पहिले हामी कलाकारहरुलाई देश विदेशको कार्यक्रममा भ्याइनभ्याई हुन्थ्यो, कोरोना भित्रिएपछि दुई वर्ष त त्यतिकै बसेर नै बित्यो । अहिले बिस्तारै वातावरण सहज हुने क्रममा रहेको छ । रेगुलर काम भइरहनु नै आयश्रोतको माध्यम हो ।
तपाईंको पहिलो म्युजिक भिडियो कुन हो र अहिलेसम्म कति भिडियो खेल्नु भयो ?
मेरो पहिलो भिडियो ‘काँकरीको झ्याङैमा लौका फलेको’ गीतको हो । अहिलेसम्म दुई सय भन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा मोडलिङ गरिसकेको छु ।
चलचित्रमा पनि खेल्नु भएको छ कि ?
एउटा कलाकारको काम हो पात्र सुहाउँदो अभिनयमा न्याय दिन सक्नु पर्दा सानो होस् वा ठुलो, मेरो पनि चाहना त चलचित्र खेल्नु नै भएपनि अहिलेसम्म आफुले चाहेको जस्तो भूमिका र ब्यानर नभेटेका कारण चलचित्रमा काम गरेको छैन ।
लोक दोहरी प्रतिष्ठानको सचिव हुनुहुन्छ, तपाईंको कार्यकालमा के परिवर्तन देख्न पाइएला ?
म एउटा महिला भएको हैसियतले सबैभन्दा पहिला त महिलामाथि हुने शोषण र विकृतीको बारेमा सुधार ल्याउने कुरामा जोड दिन्छु । अग्रजहरुकोे सरसल्लाहमा यो क्षेत्रमा के कस्ता परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि छलफल गर्ने गरेको छु ।
कलाकारबीच हुने राजनीतिलाई कसरी लिनु हुन्छ ?
राजनीति नहुने कुनै ठाउँ हुँदैन, हरेक ठाउँमा राजनीति हुन्छ । कलाकारिताको क्षेत्रमा हुने राजनीतिलाई पनि म सामान्य रुपमा लिन्छु ।
भावी लक्ष्य के लिनु भएको छ ?
भविष्यको योजना कुनै एउटा विजनेश गरेर कला क्षेत्रमा निरन्तरता दिने चाहना छ ।
सुन्दर देखिनु हुन्छ, प्रेम प्रस्ताव कतिको आउँछ ?
उमेर पुगेको छोरी मान्छे हुँ, प्रेम प्रस्ताव त आइहाल्छ नि ।
मलाई माया गर्नु हुने दर्शकहरुप्रति आभारी छु र तपाईं लगायत तपाईंको मिडियाप्रति यति मिठो कुराकानीको लागि धन्यवाद ।